LEGO အတွက်အထူးလျှော့စျေး Star Wars 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon
13 / 10 / 2021 20 / 10 / 2021 ခရစ် Wharfe 402 Views စာ0မှတ်ချက် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, Lego, Lego Star Wars, ထောင်စုနှစ် Falcon, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group, Zavvi
ငါတို့ p ရှိတယ်artနေပြည်တော် Zavvi ရောက်စေဖို့ Brick Fanatics LEGO အတွက်သီးသန့်ပေါင် ၁၀၀ တန်လျှော့စျေး Star Wars 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon.
၎င်းသည်အကြီးဆုံး LEGO အတွက် ၁၅% ကျော်သက်သာသည် Star Wars ပုံမှန်အားဖြင့် UK ၌စတာလင်ပေါင် ၆၄၉.၉၉ ဖြင့်လက်လီရောင်းချသောအချိန်နှင့်၎င်းထက်ပိုသာသောပြန်လာမှု LEGO Groupလက်ရှိ VIP အမှတ်နှစ်ဆမြှင့်တင်ရေး နဖူးစည်းမှတဆင့် (သို့) မည်သည့်အရာမှတဆင့်နှိပ်ပါ တွဲဖက်လင့်ခ်များ ဒီ page နဲ့ 100FANATIC ကုဒ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်အထိသာရရှိနိုင်သောဤသီးသန့်ကမ်းလှမ်းချက်၏အားသာချက်ကိုရယူပါ။
၃၆ ပိုင်း 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon ၂၀၁၇ တွင်စင်ပေါ်သို့ပထမဆုံးအကြိမ်ဆင်းခဲ့ပြီးထိုပထမလအနည်းငယ်အတွင်းကိုင်ရန်အလွန်ခက်ခဲကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ ယခုပင်လေးနှစ်ကြာပြီးနောက် LEGO ၏သန့်ရှင်းသောအရာဖြစ်သည် Star Wars အစုံများမကြာခဏပြန်အော်ဒါမှာသည်၊ LEGO.com တွင်ရောင်းသည် LEGO Group ၎င်း၏အငြိမ်းစားယူရန်အစီအစဉ်ကိုအမြဲရွှေ့ဆိုင်းသည်။
ဤအရာအားလုံးသည်သင်အကြီးမြတ်ဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံး LEGO Millennium Falcon ကိုမကောက်ရသေးပါကပေါင် ၁၀၀ ပိုသက်သာစေသည်။ ဤသဘောတူညီချက်သည်ဗြိတိန်စံတော်ချိန် ၂၃.၅၉ အချိန်အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်အထိသာသက်တမ်းရှိလိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့်သင်အကျိုးရှိချင်လျှင်မြန်မြန်လုပ်ပါ Brick Fanatics'အထူးလျှော့စျေး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲက Check In-depth ပြန်လည်သုံးသပ် 75192 Millennium Falcon ၏၊ ထို့နောက်တစ်ဆင့်ချင်းနှိပ်ပါ Zavvi ဤစာမျက်နှာတွင်နဖူးစည်းစာတမ်း (သို့) တွဲဖက်လင့်ခ်တစ်ခုခုကို သုံး၍ (နှင့် 100FANATIC ကုဒ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ) သင်၏လျှော့စျေးကိုအာမခံရန်။
ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်အကောင်းဆုံးကိုစုထားရုံနဲ့သင်အများကြီးစုဆောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး Brick FanaticsLEGO ထိပ်ဆုံး ၂၀ စာရင်းဒါပေမယ့်လည်းငါတို့ကမင်းကိုဒီသီးသန့်အပေးအယူတွေအပါအ ၀ င်ငါတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုထောက်ခံတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
မင်း 75192 Millennium Falcon ကိုမင်းလက်ထဲရောက်တာနဲ့မင်း iDisplayit's ကိုသုံးပြီးမင်းရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်တည်ဆောက်မှုကိုကာကွယ်နိုင်တယ်။ Millennium Falcon display ပြပွဲ သို့မဟုတ်၎င်း၏တစ်ခုခု Millennium Falcon display ကိစ္စများမရ။ ထိုရွေးချယ်မှုနှစ်ခုစလုံးသည်အမြင့် ၂၁ စင်တီမီတာ၊ ၈၄ စင်တီမီတာရှည်။ အကျယ် ၅၆ စင်တီမီတာရှိသောဤအထင်ကြီးလောက်စရာပုံစံကိုပြသခြင်းကိုလက်တွေ့ကျကျကူညီလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အပ်နှံထားသောတစ်လျှောက် Zavvi ၏အကောင်းဆုံး Black Friday သဘောတူညီချက်များနှင့်အတူယနေ့အထိရှိနေပါစေ Lego VIP တနင်္ဂနွေ, Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ ဒီလနိုဝင်ဘာလစာမျက်နှာများ
← LEGO for Adults 10290 Pickup Truck ဒီဇိုင်နာဗီဒီယိုကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်
LEGO Ferrari 512 M အတွက်သတင်းတွေထွက်နေပါတယ် Speed Champions 2022 အတွက် →